हट एयर बेलुन- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
चैत्र ७, २०७६ तस्बिर : बिजु महर्जन
उड्न पाइयोस उडे जस्तो पनि नहोस् । भुइँ छोड्न पाइयोस् भुइँ छोडे जस्तो पनि नहोस् । हिमालसँगै हास्न पाइयोस् हिउँको चिसोले पनि नभेटोस् । छ चाहना यस्तो कसैको जुन एक घण्टामै पूरा हुन सक्छ ? यस्तै साहसिक यात्रा गर्ने चहना छ भने ‘हट एयर बेलुन’ उपयुक्त हुनसक्छ ।
सुनौलो घाम, तेजिलो बन्दै गरेको सूर्योदय वा तेजिलो घाम सुनौलो बनेर डाँडापारी हराउदै गरेको सूर्यास्त होस् । यी दृष्यहरूलाई नांगो आँखाले कैद गर्दै जमिनबाट चार हजार फिटको उचाइमा आफ्नो नजिकको मान्छेसँग उडिरहन सकिन्छ । अनि पृष्ठभूमिमा माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमाललाई फेवातालमा पौडी खेलिरहेजस्तो देखिन्छ । कल्पना गर्दा पनि कौतुहल भइहाल्छ । मन फुरुंग उड्छ, अनि उडी उडी चराले जस्तै माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण र फेवाताललाई हेर्न मन लाग्छ । कस्तो रोमाञ्चक ! मनै फुरंग !
पोखरामा हो भने पर्यटकीय नगरी र यस आसपासका पर्यटकीय गन्तव्य सबै मन–मस्तिस्कमा यतिवेला छाइरहेको हुनसक्छ । फेवाताल भन्दै गर्दा पामेको माछा सम्झन पुगिन्छ । पोखरामा होइन भने पनि अबको पोखरा भ्रमण रोमाञ्चक हुनेछ । पामेबाट फेवाताल तर्फ उड्दै गर्दाको आनन्द लिन सकिन्छ ।
साहसिक पर्यटनको नयाँ तथा सुरक्षित यात्राको रुपमा ‘बेलुन नेपाल’ले १६ महिना अघिबाट प्रतिव्यक्ति २० हजार डलर बराबरको बिमासहित ४ करोड ५० लाखको लागतमा ‘हट एयर बेलुन’ संचालनमा ल्याएको हो ।
बेलुनमा जडान गरिएको बास्केटमा पाइलटसहित तौलका आधारमा नौ जनासम्म यात्रा गर्न मिल्छ । समूहमा हो भने बेलुन ‘रिजर्व’ गरेरै यात्रा गर्न सकिन्छ । सम्झनाका लागि खिचिएका फोटो, भिडियो बाहेक लेकसाइडबाट पामेसम्मको आवतजावत कम्पनीले नै उपलब्ध गराउँछ । मौसमको प्रतिकूलताबाहेक हरेक दिन बिहान र साँझ बेलुन उडाइन्छ ।
असार, साउन र भदौमा भने सुरक्षाका कारण कम्पनीले सेवा संचालन गर्दैन । सूर्योदय र सूर्यास्तको समय भएकाले ज्याकेट र पञ्जा लगाएर चिसोबाट बच्न सकिन्छ । नेपाली, भारतीय र अन्य देशका पर्यटकको हकमा ३० मिनेट र एक घण्टाको छुट्टा छुट्टै शुल्कमा हट एयर बेलुनको रोमाञ्च लिन सकिन्छ ।
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७६ १५:०६